Ule Ule: Nyocha nke Intanet
Monday, December 19, 2011 Sunday, October 4, 2015 Hanna Johnson
Mepụta nyocha ịntanetị bụ ngwa ngwa, ụzọ dị mfe iji gakwuru ndị ahịa gị ka ha nwee echiche ha banyere ihe ọ bụla. Ọrụ m na Nyocha Zoomerang Online na Polls nwere ike ime ka m ghara ile mmadụ anya, mana ihe niile dị jụụ ị nwere ike iji nyocha mee m. Daysbọchị ndị a, ị nwere ọtụtụ nyocha nyocha, site na itinye ya n'ime saịtị gị, iji zipu ya site na ederede na ekwentị ndị mmadụ, iji mepụta ya ma zipụ ya na Facebook.
My mmasị onwe onye nke ndị a dị egwu ike bụ otu n'ime anyị Kacha ọhụrụ atụmatụ. Ọ na-enye gị ohere bulite ihe oyiyi nke obosara na ịdị elu ọ bụla, ruo 250k na nha faịlụ, n'ime nyocha gị. Wezụga ụzọ doro anya dị egwu i nwere ike iji atụmatụ a mee ka nyocha gị mara mma, kpuchie ya na njirimara gị, ma ọ bụ nweta echiche nke otu gbasara uwe nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ, atụmatụ a na-enye ohere maka nyocha echiche dịka ọ dịtụbeghị mbụ.
Nyocha echiche bụ usoro ịtụle nzaghachi ndị ahịa na ngwaahịa, akara, ma ọ bụ echiche tupu ebute ya n’ahịa ahụ. Ọ na-enye ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji melite ngwaahịa gị, chọpụta nsogbu ma ọ bụ adịghị ike ọ bụla, ma jide n'aka na ihe oyiyi gị ma ọ bụ akara gị ezubere iche. Only ga-elerịrị anya na Netflix, Qwikster debacle iji ghọta mkpa ọ dị ịrịọ echiche nke ndị ahịa gị tupu na-eme nnukwu mkpebi…
Nyocha ndị dị n'ịntanetị bụ ụzọ dị mma iji nwalee echiche, na inwere ike iji ha tinye nsogbu maka igba okwu niile. Ndia bu ato:
Nnwale Logo: Anyị niile maara otu ọ dị mkpa inwe a logo nke kwesịrị ncheta ma na-ọma kwekọrọ na gị ika. Ka na-agbali ịhọrọ nke ziri ezi iji nọchite anya gị? Ozugbo imepụta akara ngosi ma tinye ya n'ime ụwa na njikọ gị, ọ nwere ike bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ịgbanwe ya wee degharịa onwe gị. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịmalite nyocha echiche nyocha tupu ị banye na njirimara.
Gosi ihe nyocha gi na achota akara ngosi di iche-iche, juo ha ihe mmetuta na mmeghachi omume nke agwa a. Ihe logos ị họọrọ na-egosi ebumnuche ụlọ ọrụ gị yana ụkpụrụ ya? Chọpụta tupu ịhọrọ akara, ọ bụghị mgbe emechara.
Ad / mkpuchi nzaghachi: Bipute mgbasa ozi ga-eme ka ịlaghachi penny mara mma, yabụ ịchọrọ ijide n'aka na ejiri ya nke ọma. Mepụta nyocha site na onyonyo nke mgbasa ozi ịchọrọ iji, ma nwalee ha na ndị na-ege ntị dị iche iche. Chọpụta ihe mgbasa ozi gị gwara ha. Kedu ụdị adjective ha ga-ejikọ na akara ma ọ bụ ngwaahịa gị dabere na mgbasa ozi ahụ? Kedu ka mgbasa ozi ahụ si eme ka obi dị ha? Ihe nzaghachi ị nwere ike nweta gbasara mgbasa ozi gị site na nyocha gị, ọ ga-abụ na mgbasa ozi ahụ ga-emezu ebumnuche gị.
N'otu aka ahụ, itinye ihe oyiyi na nyocha ịntanetị gị bụ ụzọ dị mma iji jide n'aka na mkpuchi gị na-arụ ọrụ ma dị irè. Kedu onye na-adọrọ mmasị karị (ya mere nwee ike ịre ahịa ahịa) nye ndị na - agụ akwụkwọ gị, Lady Gaga ma ọ bụ George Clooney? Chọpụta na ezighi ezi nwere ike ibute oke oke uru gị, yabụ nwalee mkpuchi mkpuchi gị, isi okwu, yana echiche akụkọ kacha mkpa tupu itinye otu.
Nzaghachi Weebụsaịtị: Eshazigharị weebụsaịtị gị nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ, ọ nwere ike isi ike ịmata ma mgbanwe ndị ị na-eme ọ dị irè ma ọ bụ na ọ bụ naanị oge na ego na-efu. Bulite onyonyo nke aghụghọ na nyocha, ma nwalee iji ya, izi ozi na igodo usoro ọhụụ gị. Jụọ ajụjụ dị ka: “Gịnị ka ị na-echetakarị banyere ụdị ihe ị hụrụ ugbu a?” “Gịnị ka i chere ụlọ ọrụ a na-eme?” “Ebee ka ị ga-pịa iji mụtakwuo banyere ma ọ bụ zụta ngwaahịa a?” The ọzọ nzaghachi ị nwere ike nweta banyere gị imewe gị nnyocha e mere, ka o yikarịrị ka ọ bụ na imewe ga-emezu ihe mgbaru ọsọ gị.
Ntụle echiche bụ nke kachasị ọsọ, ụzọ kachasị mfe iji jide n'aka na ihe oyiyi ị na-eji bụ nke ziri ezi, ma ọ bụ maka akara ngosi gị, mgbasa ozi, weebụsaịtị, ma ọ bụ mkpuchi. Egbula oge na ego na onyonyo na-ekwughi ihe ịchọrọ. Zipu nyocha echiche maka nyocha echiche 2.0. Ndị ahịa niile maara ihe na-eme ya.
Tags: echiche echichenyocha echichennyocha nyocha echichennyocha e mere
Hanna bụ Social Media Marketer maka SurveyMonkey. Ọchịchọ ya maka ihe niile gbasara mmekọrịta mmadụ na ọ gbatịrị iyi Tweet ya. Ọ hụrụ ndị mmadụ n'anya, oge obi ụtọ, na egwuregwu egwuregwu dị mma. Ọ gara mpaghara niile ma e wezụga Antarctica, mana ọ na-arụ ọrụ na ...
Ego akụkọ ihe mere eme nke ekwentị